Fayriska Cusub Ee Hirarka Mawjadaha Ah Iyo Dalalka Yurub Oo Xayiraado Ku Baaqay | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Health & Education / Somalia / Somaliland / Warar | By admin
Fayriska Cusub Ee Hirarka Mawjadaha Ah Iyo Dalalka Yurub Oo Xayiraado Ku Baaqay
Mawjadaha Hirarka Cusub Ee Fayriska Iyo Dalalka Yurub Oo Xayiraado Ku Baaqay
Astaamaha Iyo Wajiyada Xannuunka iyo Tallooyinka Khuburada Caafimaadka Aduunka
London(ANN)-Dunida, ayaa si weyn uga wer-wersan xaaladda mustaqbalka kaddib markii la arkay mawjado kale oo xannuunka laysu gudbinkaro, kaas mawjado cusub xilligan la arakay.
Japan, France, Spain, Sweden iyo Canada ayaa ah dalalkii ugu dambeeyay ee laga helo cuduro ay qabaan dadku oo ah noocyo badan oo la isugudbin karo oo markii ugu horreysay laga soo sheegay Britain.
Baadhitaanadu waxay muujinayaan in inta badan dadka Maraykanka ahi ay hadda qaataan tallaallada Coronavirus, halka Afrika ay la halgamayso mowjadeedii labaad ee Fayriska.
Kiisaska nooca cusub ee cudurka ‘Covid-19 virus’ ayaa Sabtidii laga xaqiijiyay dalal badan oo Yurub ah, kuwaas oo ay ku jiraan Spain, Sweden iyo Switzerland, waxayna dhammaantood ahaayeen dadka laga helay kuwo ka yimi Ingiriiska.
Dalka Japan ayaa ku dhawaaqday inay mamnuucayaan dhammaan waxyaabaha cusub ee badeecaddaha soo gelaya dalka iyo dadka ajnabiga ah, laga bilaabo Isniinta ka dib markii laga helay dad kala duwan oo socdaalayaasha ka yimi Boqortooyada Ingiriiska.
Jariirada theguardian, ayaa warbixin ay daacday ku sheegtay in Lix milyan oo qof oo kale oo ku nool bariga iyo koonfur-bari England ay haystaan heerarka derejada xanubaada ee 4aad, heerka ugu adag England ee Covid-19, oo lagu soo rogay Maalinta Boxing Day.
Xidhitaanka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay Scotland iyo Waqooyiga Ireland. Sida lagu sheegay warbixinta Qiyaastii 24 milyan oo qof oo ku nool England, in ka badan 40% dadweynaha, ayaa hadda ku nool heerka xanibaada ee 4aad, iyadoo cadaadiska uu ku sii fidayo waddanka oo dhan in lagu daro qaybtan.
Dhinaca kale, Saynisyahano ka socda kooxda Independent Sage group ayaa ku booriyay in dhamaan gobolada England la dhigo heerka 4aad, taas oo macnaheedu yahay in dukaamada aan muhiimka ahayn, timo jarayaasha, iyo goobaha raaxada iyo madadaalada ay tahay inay xidhmaan. Sida lagu sheegay warbixin ay daabacday theguardian.
Dalalka is-khilaafsan waxaa lagula taliyay inay keenaan qufulkooda qaran. Tier 4 waa in lagu daraa xayiraadaha safarka ee la wanaajiyay, kooxdu waxay sheegeen iyaga oo ku doodaya in la soo bandhigo qorshe deg-deg ah oo awood u siinaya waxbarashadda badbaada ah bilaha January and February.
Dhinaca kale, dalka Spain ayaa ku dhawaaqday xaalad deg-deg ah oo laga yaabo inay kordhiso ilaa March 2021, Britain, waxay ku dhawaaqday bil oo xanibaad ah, halka France ay shaacisay laba todobaad, iyadoo Germeny ay sheegtay Afar todobaad oo xayiraad ah.
Italiy iyo dalal kale oo badan ayaa qorshaynaya inay ku dhawaaqaan xanibaad deg deg ah, iyadoo laga cabsanayo mawjadaha mar kale iyo COVID-19, kaas oo dunida ku habsaday labadii sanadood ee u danbeeyay, isla markaana galaaftay nolosha malaayiin qof, oo kala qoqobay aduunka iyo isu socodka, sidoo kalena dhaqaalaha aduunka dhulka jid-jiiday.
Halkan ka daalaco astaamaha Fayriska, marxaladaha iyo wajiyada uu leehayahay iyo tallooyinka khuburada caafimaadka.
Astaamuhu waxay muuqdaan laga bilaabo maalinta saddexaad ee cudurka kadib (astaamaha fayriska cusub).
Xannuun jidhka ah, indhaha ah oo xannuun laga dareemo, ama gubanaya, Madaxa, Hungaaco, ama matag, shuban, Sanka oo dheeceen ka dareero ama xidhma, xidhma, Burbur tabcaan ah, Kaadida oo ku gubta, Dareen qandho, cunnaha oo ku xannuuna.
Khuburada caafimaadka ayaa ku talinaya in ay muhiim tahay in la tiriyo maalmaha astaamaha: 1aad, 2aad, 3aad, si Tallaabo loo qaado ka hor inta aannay qandhada, ama xumadu bilaabmin.
Khuburada, ayaa ku talinaya in la muujiyo Taxaddar, sidoo kale, waxay sheegayaan in ay muhiim tahay in aad cabto cabitaanno fara badan, gaar ahaan biyaha la sifeeyey, ama biyo nadiif ah.
Cab biyo fara badan si cunahaagu u ahaado mid qoyan una caawiya nadiifinta sanbabadaada.
Waxay sheegeen in laga bilaabo maalinta 4aad ilaa 8aad) uu jirayo caabuq, kaas oo sababaya in hadhanka ama urta oo kaa luma, daal, laabta oo ku xannuunta oo adkaata iyo dusha Feedhaha.
Sidoo kale Xannuun dhabarka hoose iyo aagga kelyaha.
Fayrasku wuxuu weerraraa xididdada dareemayaasha;
Farqiga u dhexeeya daalka iyo neefta oo ku qabata:
Hawo la’aantu waa marka uu qofku fadhiyo – isagoon wax dedaal ah samaynin – oo neefta ka baxda hiin-raaga.
Daalku waa marka qofku u soo dhaqaaqayo inuu sameeyo wax fudud oo uu dareemo daal.
Waxaad qaadataa biyo badan iyo fiitamiin C.
Covid-19 wuxuu xidhaa ogsojiinta, sidaas darteed tayada dhiiggu waa liidataa, wuxuuna helayaa ogsojiin yar.
Wajiga 3-aad – bogsashada;
Maalinta 9aad, wajiga bogsigu wuu bilaabmayaa, kaas oo socon kara ilaa maalinta 14 (isku-dhafka).
Dib ha u dhigin daaweynta, sida ugu dhakhsaha badan ayaa u wanaagsan!
Nasiib wacan qof walba!
Way fiicantahay in la ilaaliyo talooyinkan, ka hortaggu ma badna!
fadhiiso qorraxda 15-20 daqiiqo, Naso oo seexo ugu yaraan 7-8 saacadood. Cab 1 litir iyo badh oo biyo ah maalintii.
Cuntada oo dhami waa inay ahaataa mid kulul oo aan qabow ahayn.
Maskaxda ku hay in pH-ka ee coronavirus uu u dhexeeyo 5.5 ilaa 8.5.
Markaa waxa keliya ee ay tahay inaan samayno si aan u cidhib-tirno fayrisku waa innaan cunno cunno badan oo alkaline ah, oo ka sarreysa heerka Aysiidha (above the acid level of the virus) fayriska.
Sidee ku ogaanaysaa inaad leedahay Covid-19?!
Cunaha oo cuncuna
Throat Cunaha oo qallala
Cough Qufac qallalan
Temperature Heerkul sarreeya
Breathing Neefsashada oo kugu adkaata
Smell urka iyo dhadhanka oo kaa luma
Macluumaadkan maaha oo kaliya naftaada, sii dhamaan qoyskaaga iyo asxaabtaada.
Waxyaabaha ay dhakhaatiirta iyo khuburada caafimaadku ku talinayaan in la cuno, waxa ka mid ah kuwan:-
Muuska, Liinta .9 9.9 pH
Lemon Liin huruud ah → 8.2 pH
Voc Avocado – pH 15.6
Lic Toonta – pH 13.2
Cananaaska – 12.7 pH
C biyo-biyo – 22.7 pH
Liinta – 9.2 pH